government – democracy for burma
On October 14, 2015 October 14, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, DOCUMENT, ETHNIC ARMED GROUPS, government, MYANMAR, NATIONWIDE CEASEFIRELeaveacomment
The nationwide ceasefire agreement between government and ethnic armed organizations Min Zaw Oo Domestic witnesses (21) …….confirmed International witnesses (6)……. confirmed Diplomats to sign “in the presence of” ……….(45) countries confirmed (out of 80 countries that have diplomatic relation with Myanmar) so far
On April 2, 2015 April 2, 2015 By Burma Myanmar newsIn BONANZA RACEWAY, government, ThailandLeaveacomment
On February 13, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, government, MYANMARLeaveacomment
ဒီနေ့ကျတော့ လွှတ်တော်အဆုံးအဖြတ်က ကျေနပ်စရာဖြစ်ရင်လည်း ရန်ကုန်ကို ဆက်ချီတက် ပြီး အောင်ပွဲခံမယ်။ မကျေနပ်ရင်လည်း ရန်ကုန်ကို ဆက်ချီတက်မယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်ထွက်လာ ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုဆွေးနွေးပြီး ဘယ်သူက ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဆိုတာ တော့ မသိ ရပါဘူး။ Continue reading “#ဖေဖော်ဝါရီ၁၁ #ရက်နေ့ လေးပွင့်ဆုိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကျောင်းသားများရဲ့ေ#တာင်းဆိုချက် #၁၁” →